Faa'iidooyinka Saliida Saytuunka Iyo Sida Loogu Qurxiyo Jidhka & Timaha - Daryeel Magazine
Saliida olive ama saliida saytuunka waxa ay ka baxdaa waddama bariga dhexe ama waddama cimilada kulul leh. Saliida olive oil waa mid markeeda hore Quraani ah oo Allah (swt) ku xusay geedkeeda Kitaabka Quraanka Kariimka ah iyo waliba waa mid Sunnada Nabigeena suuban (scw ) aad uugu dahab ah. Waxtarkeedana aan halkan lagu soo koobi karin habka Rasuulka (scw) iyo asxaabtii Allah ka raali noqdee ay uuga faa´iidaysan jireen. Wanaaga ay geedkan zayntuunka (olive) waxa uu Allah (swt) kaga hadlaya suuradahan [surah at-Teen; 95: 1-2], surah al-An’am; 6: 99, 141, surah an-Nahl; 16: 11, surah an-Nur; 24:35, surah al-Mu’minun, surah at-Tin; 95: 1, and surah Abasa; 80: 29.
Saliida saytuunka waliba waa saliida uuga soo dhaw dufan ka dabayciga ah ee uu Allah jidhkeen ku abuuray. Sidaa darteed bay saliidan cunideeda iyo isticmaalka maqaarkuba dahab u yahay. Waxa kale oo ay qani ku tahay inay ay leedahay maado ka qayb qaadata dib u dhisida maqaarka, waxayna jidhka ka difaacda la dagaalanka free redicals oo ah waxyaabo sun ah. Waxa kale oo ay saliidani cajiibku tahay in ay jidhka qaboojiso sida marka uu jidhku hafeefanayo, ama cadceedu soo gubto, in ay maqaarka qaboojiso. Waxaa loo siticmaali karaa in ay jidhka qaboojiso xiliga xumadi jirto. Waxaa kale oo loo isticmaali kara marka uu madaxa ama dimaha guntoodu qalasho oo toxob/ agool gunta madaxu yeesho in lagu qooyo wasakhdana lagaga suuliyo. Haddii inta layara diiriyo saliida saytuunka timaha aflaaqada leh ama dhaawucu gaadhay la mariyo way caawinaysaa.
Saliida saytuunka marka aad soo iibsanaysid soo iibso mid dhalada ay ku jirtaa tahay dhalo madow ku jirta. Ula jeedaduna waxa ay tahay saliidan quality geedu waxa uu waara marka lagu kaydiyo shay madow, lana dhigo meel qabow oo madow. Hanna cunin ama isticmaaliin saliid in badan dhacsanayd waayo waxtarkeedii baa dhacay oo cilad bay keeni kartaa.
Marka cuntada lagu darsanayo waxaa inta badan ay idhaahdaan cilmi baadhayaasha caafimaad in saliidu ayna ku fiican nayn in wax lagu kariyo ama lagu shiilo. Dabka aadka u kululi waxa uu ukeenayaa saliida saytuunka in uu nusqaamiyo waxtarkeedii, marka uu wax tarku nusqaamo waxaa dhici karta in wax kale isku badalo. Sidaa darteed ayey saliidani ku fiican tahay in lagu daro marka cuntada dabka laga soo dhigo ama waxyaabo kale oon dab u baahnayn lagu darsan karo.
Waxaa saliida saytuunka looga hortagi karaa cudurrada wadna, maadama ay saliidu hoos u dhigayso triglyceride ka dhiiga iyo waliba ka hortaga HDL cholesterol ka xun ( LDL) ee xididada dhiiga subag jufan ku noqda. Waxa ay saliidan hoos markaa u dhigaysaa cholesterol (LDL) xun iyadoon hoos u dhigayn cholesterol (HDL) ka fiican . Haddii uu cholesterol ka xun iyo triglyceride ka dhiigu ay bataan waxa ay keeni karaan cudurada ku dhaca wadna iyo agagaarkiisa iyo in ay curuuqda dhiigu isla xidhaan dufan awgeed. Ciladahaas oo keeni kara xididada guntama ama wadnna istaag ama madaxa oo dhiig ku furmo iwm.
Waxa ay cilmi baadhistu tusaysaa dadka qaba dhiigkarka , haddii ay isticmaalaan saliida saytuunka in badan inaysan u baahnayn daawooyin faro badan. Arrinkanina maaha mid aad adigu ku dhaqmi kartid dhakhtarka oon kiula scon.
Xagga dheefshiida :Haddii cunto nadiif ah oo u badan khaluun iyo khudaar iwm aad cuntid ood waliba aad raacisid saliida saytuunka waxa ay ka hortagtaa cancel ka caloosha, waxa ayna kor u qaadaa caafimaadka beerka iyo waliba waxa ay ka qayb qaadataa nadaafada jidhku uu iska saara sunta jidhka gasha. Waxa kale oo ay saliidana dheefshiida faaiido way ugu tahay si ay in dheefshiidu si sahlan cuntada nafaqda uugala bixi karta. Waxayaaba kale ee ay saliidu uugu fiican tahay xaga dheefshiida waxaa ka mid ah in ay ka hortagto xanuunka xamaytida, nabarka caloosha iyo calool istaaga xagga midhicirada.
Saliidan saytuunka waxa kale oo ay ka hortagtaa xanuunada lafaha ku dhaca . Waxa kale oo saliidu kobcisaa maskaxda kana hortagtaa iloowshaha.
2 dl oo saliida saytuunka ah
1 dl oo saliida saytuunka (oliven oil) ah
Koob natural yoghurt
1 oo beedka ama ukunta inta huruuda ama jaalaha ah
Haddii intan oo dhan aad isku dartid oo aad gacmaha iyo lugaha ku radisid. Waxa aad gacmaahaga ka nadiifinaysaa madowga, qalaylka iyo in ay kuu dhadhaalaan. Lugahana waxaad ka suurinaysaa safanka, dildilaaca iwm. Laakiin lugaha bac baa lagu xidhi karaa. Ha ku seexan laakiin xoogaa waad ku joogi kartaa, kadibna si fiican tuwaal uugu xoq oo wasakhdoo dhan ka daadi , biyo cadna ku xalee. Kadibna Saliid saytuun waxba lag darin ku duuq oo ku daa. 3 wiig ka bacdi isoo ducee insha Allah lol markaad quruxdaada is daawatid.
Halkan kuma soo koobi karo hababka kala duwan oo looga faaiidaysan karo saliida saytuunka oo daryeelka jidhka laagu dhisi karo. Dhamaan waxyaabahan kor ku soo sheego dhan, waxa ay u baahan yihiin ugu yaraan 2-3 cisho in aad wiigii isticmaashid si aad natiijado fiican u gaadhid iyo waliba mudo waa inaad waddaa. Balse wixii xasaasiyad ama alergic aad ku leedihiin idinkaa iska dayn doonaa inshaAllah. Ogowna wax walba ha iskula dagdagin ee horta meel jidhkaaga ah ku tijaabi oo iska eeg alergic..
Iyo qaar kale oo badan waxtarka ay leeyihiin iyo habka loo isticmaalayo.
Baarka Allahu fiikum
Youtube Umm Cafiifah
Waa inoo next topic inshaAllah
Hababka Jidhka Iyo Timaha Loogu Qurxiyo Timirta Qiimaha Caafimaad Ee Saliida Dhaga Yaraha Iyo Sida La Iskugu Daaweeyo